Media Sales Staff | ACS MYANMAR MEDICAL CO., LTD. ﻿
6.12.2019, Full time , Medical / Hospital
Company: ACS MYANMAR MEDICAL CO., LTD.
• လူအများနှင့် ဆက်ဆံရခြင်းကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
• သွက်လက်တက်ကြွပြီး သန့်ပြန့်ရည်မွန်သော ပုံစံရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
• အနုပညာနယ်ပယ်တွင် သွားလာနိုင်ရမည်။
• FMV Event Management နှင့် Gifted Creative Medica အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်။
• အသက် (၁၈)နှစ်မှ (၂၅)နှစ်အတွင်း
• တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။
• သူတစ်ပါးအား မိမိရှင်းလင်းတင်ပြလိုသော အကြောင်းအရာများကို သေချာရေလည်စွာ ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
• Media လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
• လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများကို မိမိတို့မှ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
We offer • Male/Female (15)posts
Work location No.(71),Thumingalar Housing, Thunandar Street,Yangon.
Company Industry: Media Sales Stafff
Job posted: 6/12/2019
2 Days, Full time , Medical / Hospital
•	ဖော်ရွေသောစိတ်နေစိတ်ထားနှင့် ယဉ်ကျေးသော ကိုယ်ဟန်အမူအယာ ရှိသူများကိုသာဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ •	အချိန်မရွေး ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးများသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မှုမြင့်မားပြီး လုပ်င� ...
Job description • လူအများနှင့် ဆက်ဆံရခြင်းကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ • သွက်လက်တက်ကြွပြီး သန့်ပြန့်ရည်မွန်သော ပုံစံရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ • အနုပညာနယ်ပယ်တွင် သွားလာနိုင်ရမည်။ • FMV Event Management နှင့် Gifted Creative Medica အဖွဲ့အစည်း ...
Media,Digital & Creative jobs Media,Digital & Creative jobs Media Sales Stafff Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Sales Representative M (5)
Stanford Canadian International School